BANNER POLE NYANZVI
Weihai Wisezone Outdoor Equipment Co., Ltd. (Weihai Wisezone Display Equipment Co., Ltd.) ikambani yakagadzwa inogadzira ine makore gumi nemanomwe ruzivo, inyanzvi muindasitiri yekushambadzira yemureza / danda remureza & midziyo inotakurika yekuratidzira.
Kuve mutungamiri mune banner pole indasitiri nekugadzira zvigadzirwa zvitsva.
Kugadzira kukosha kwechigadzirwa kune vatengi uye kubatsira vashandi kuti vakwanise kuzvikoshesa.
Kunakidzwa nekubudirira uye kukura nevatengi, vashandi uye vatengesi.
Weihai Wisezone ndiyo kambani yekutanga muChina inoshandisa carbon composite zvinhu kugadzira mapango anobhururuka kubva 2005. Haisi yekutanga kugadzira mabhena anobhururuka munyika, asi takaivandudza zvirinani kupfuura yekutanga uye kugadzira indasitiri yecarbon composite banner. mapango eChina uye ndeimwe yeIndasitiri main Standard vagadziri vekabhoni composite / fiberglass banner mapango.
Nekuda kwedu kwekuvandudza, timu yedu yeR&D inoramba ichigadzira zvigadzirwa zvitsva gore rega.Isu takave nezvinhu zvinopfuura gumi zvine patented senge multi-functionbase yemvura,4in1 mureza danda system, musana mureza mumugwagwaizvo zvanga zviri zvinhu zvakakurumbira pasi rose uye zvichiteverwa nevamwe.
Isu tinogashirawo chikumbiro chemunhu uye kugadzira zvigadzirwa zveOEM/ODM kwauri chete.
Isu tine hanya nezvezvakatipoteredza uye vashandi vedu, tinopasa Ethical Audit uye nhengo yeSEDEX
Takashanda nemakambani mazhinji anotungamira ekudhinda mureza, maratidziro nezviratidzo vanopinza/vanoparadzira munyika makumi manomwe pasi rose.
Unoda kushandira pamwe neakavimbika mugadziri zvakananga?pls inzwa wakasununguka kutibata, Wzrods haana kumbokusiya iwe.
Isu tiri kugara tichishanda mukuvandudza kugadzirwa kwedu neLean Management, iyo inogona kubvumira kugadzirwa kwedu kuve kuchinjika zvakanyanya munguva pfupi, Ever 12000pcs mapango mumazuva gumi nemaviri.
Kurerukira, kureruka kurema uye kusimba kwepamusoro ndizvo zvimiro zvekabhoni yedu composite mureza mapango.3 makore waranti kune edu ese akajairwa matanda, izvo zvakabvumikiswa kurarama pasi160km/h mhepo yekumhanya bvunzomuItaly Wind Tunnel Lab.
Hunhu hwegoridhe, Nguva pfupi yekutungamira, Mutengo unonzwisisika, Eco-hushamwari uye zvigadzirwa zvekuvandudza zvinotiita mutungamiri muindasitiri iyi.Makambani anodhinda pasi rose, mabhurendi uye vanosaina vanobva kunze kwenyika;ratidza midziyo vagovera vanosarudza kushanda nesu.
Pane mawzrods akamira, panoitika zvinoshamisa!